नियन्त्रित पदार्थ कानून के हो? | चेकअप - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल स्वास्थ्य घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी >> नियन्त्रित पदार्थ कानून के हो?
नियन्त्रित पदार्थ कानून के हो?
नियन्त्रित पदार्थ ऐन (CSA) एक संघीय, अमेरिकी औषधि नीति हो, जस अन्तर्गत केहि पदार्थहरूको निर्माण, आयात, कब्जा, प्रयोग, र वितरण विनियमित छ। यसको अन्तर्गत, सबै पदार्थहरू जुन विद्यमान संघीय कानून अन्तर्गत कुनै तरिकामा विनियमित हुन्छन्, पाँच तालिकामध्ये एकमा राखिन्छन्।
नियन्त्रित पदार्थ अधिनियममा कुन औषधि सामिल छन्?
केहि नुस्खा औषधि, र अवैध औषधि CSA को हिस्सा हो। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जसको दुरुपयोगको उच्च सम्भावना हुन्छ यस उद्देश्यका लागि समावेश गरिएको छ। औषधिहरू तिनीहरूको दुरुपयोग क्षमता, चिकित्सा अनुप्रयोगहरू, र सुरक्षाको आधारमा पाँच तालिकामा वर्गीकृत गरिएको छ। यस अनुसार औषधि प्रवर्तन एजेन्सी (डीईए) , तिनीहरूलाई निम्न तरिकाले वर्गीकृत गरिएको छ:
एक खमीर संक्रमण एक गलत सकारात्मक औषधि परीक्षण को कारण हुन सक्छ
अनुसूची I ड्रग्स, पदार्थ, वा रसायनहरू ड्रग्सको रूपमा परिभाषित गरिएको छ हालसालै स्वीकृत मेडिकल प्रयोग र दुरुपयोगको लागि उच्च सम्भावित बिना। तालिका I का उदाहरणका हेरोइन, लाइजरिक एसिड डायथिलाइड (LSD), मारिजुआना (भांग), 4,4-methylenedioxymethamphetamine (एक्स्टसी), methaqualone, र pyote समावेश।
अनुसूची २ ड्रग्स, पदार्थ, वा रसायनहरू दुर्व्यवहारको लागि उच्च सम्भावित ड्रग्सको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, प्रयोगको साथ सम्भावित रूपमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक वा शारीरिक निर्भरता। यी औषधिहरू खतरनाक पनि मानिन्छ। अनुसूची २ ड्रग्सका केही उदाहरणहरू प्रति युनिट १ 15 मिलीग्राम भन्दा कम हाइड्रोकोडोनको साथ संयोजनको उत्पादनहरू हुन्। विकोडिन ), कोकेन, mehamphetamine, metadone, hydromorphone ( Dilaudid ), meperidine ( डिमेरोल ), oxycodone ( OxyContin ), फेन्टानेल , Dexedrine , Adderall , र Ritalin ।
तालिका III ड्रग्स, पदार्थ, वा रसायनहरू शारीरिक र मनोवैज्ञानिक निर्भरताको लागि मध्यम देखि कम सम्भावित ड्रग्सको रूपमा परिभाषित छन्। तालिका III लागूपदार्थको दुरुपयोग सम्भावना तालिका I र अनुसूची II ड्रग्स भन्दा कम छ तर तालिका IV भन्दा बढी हो। अनुसूची III औषधिहरूका केही उदाहरणहरू प्रति खुराक एकाईमा कोडिनको code ० मिलिग्राम भन्दा कम (कोडिनको साथ टायलनल) समावेश उत्पादनहरू हुन्। केटामाइन , एनाबोलिक स्टेरोइड्स, र टेस्टोस्टेरोन ।
अनुसूची IV ड्रग्स, पदार्थ, वा रसायनहरू दुर्व्यसनको लागि कम सम्भावित र निर्भरताको कम जोखिमयुक्त ड्रग्सको रूपमा परिभाषित छन्। तालिका IV ड्रग्सका केही उदाहरणहरू छन् Xanax , सोमा , Valium , अटिभन , तालविन, अम्बियन , ट्रामाडोल ।
अनुसूची V ड्रग्स, पदार्थ, वा रसायन अनुसूची IV भन्दा कम दुरुपयोगको लागि कम सम्भावित ड्रग्सको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र केहि मात्रामा मादक पदार्थहरूको सीमित मात्रामा तयारी समावेश गर्दछ। अनुसूची V ड्रग्स सामान्यतया एन्टिडाइरियल, एंटीट्यूसेभ, र एनाल्जेसिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुसूची V ड्रग्सका केहि उदाहरणहरूमा २०० मिलिग्राम भन्दा कम कोडिन वा प्रति १०० मिलिलिटर (रोबिटसिन एसी) को साथ कफ-तयारी समावेश छ, लोमोटिल , मोटोफेन , Lyrica , पेरेपेक्टोलिन।
सम्बन्धित: खोकी सिरप लतका खतरहरू जान्नुहोस्
नियन्त्रित पदार्थ कानून कहिले पारित भयो?
सीएसएलाई अक्टूबर २ 27, १ 1970 .० मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले कानूनमा हस्ताक्षर गरे। १ 1970 st१ को संयुक्त राज्य कांग्रेसले १ 1970 .० को बृहत्तर लागूऔषध दुर्व्यवहार रोकथाम र नियन्त्रण ऐनको शीर्षक दोस्रोको रूपमा सन् १ 1970 1970। लाई नियन्त्रणित पदार्थ ऐन पारित गरे।
कसले ड्रग्स नियन्त्रित पदार्थ अधिनियममा समावेश छन् भनेर कसले निर्णय गर्छ?
धेरै एजेन्सीहरू थप्न, मेटाउन, वा CSA मा औषधि वा पदार्थको लागि तालिका परिवर्तन अनुरोध गर्न सक्दछन्। यी एजेन्सीहरूले डीईए, स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग (DHHS), खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए), वा कुनै पनि अन्य पक्षबाट डीईए समक्ष एक याचिका मार्फत समावेश गर्दछ। यहाँ नियन्त्रणित पदार्थहरूको पूर्ण सूची छ । राज्य एजेन्सीहरूले आफ्नो राज्यमा पदार्थहरूको लागि अझ कडा वर्गीकरण निर्दिष्ट गर्न सक्दछन्। उदाहरणका लागि, केहि राज्यहरूले न्युरोन्टिन (गेबापेंटिन) लाई नियन्त्रित पदार्थको रूपमा पुन: वर्गीकृत गरेका छन, यद्यपि यसको संघीय वर्गीकरण अझै पनि नियन्त्रण छैन।
नियन्त्रित पदार्थहरूको लागि म कसरी पर्चाहरू भर्छु?
विगत धेरै वर्षहरुमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको औषधीको अत्यधिक मात्रामा हुने मृत्युको अभूतपूर्व संख्या भएको छ। यी मृत्यु मध्ये धेरै को एक बाट थिए प्रिस्क्रिप्शन ओपिओइड दर्द रिलिभर , विशेष गरी अक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, वा मेथाडोन। सबै राज्यहरूमा औषधीको अत्यधिक मात्रा मृत्युको महामारीले असर गर्दैन। नतिजाको रूपमा, बिभिन्न राज्यहरूको यी नियन्त्रणित पदार्थहरूमा बिभिन्न नियमहरू छन्: विशेष गरी औषधिको दुरुपयोग र दुरुपयोग रोक्नको लागि समय वा खुराक सीमा निर्धारणसँग।
राज्यहरू कसरी नियमित गर्दछ अलि फरक छ। उदाहरणको लागि, टेक्सासले डाक्टरलाई प्रिस्क्रिप्सनलाई अनिश्चित कालका लागि पुनः भरिन अनुमति दिन निषेध गर्दछ। प्रिस्क्रिप्शनले दोहोर्याएको समयको लम्बाइ औषधिमा निर्भर गर्दछ — यो प्रिस्क्रिप्शन लेखिएको मितिदेखि छ महिना देखि एक वर्ष सम्म हुन सक्छ। त्यस पछि, बिरामीले फेरि डाक्टरको पर्चा नवीनीकरण गर्न डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। एक फार्मासिष्टले तपाईंको सदस्यता भर्न अस्वीकार गर्न सक्दछ यदि, अन्य कारणहरू बीच, तिनीहरू चिन्तित छन् कि अत्यधिक एक खुराक निर्धारित गरिएको छ।
तपाईंको राज्यको लागि प्रतिबन्धहरू जाँच गर्न, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ रोग नियन्त्रण केन्द्र (CDC) सन्दर्भ सुरूवात विन्दुको रूपमा।
बीमा संग जन्म नियन्त्रण कति छ
नियंत्रित पदार्थहरूको लागि एकलकेयर कूपन
नियंत्रित पदार्थहरूको लागि सबै एकलकेयर कूपन पृष्ठहरूको शीर्षमा एक चेतावनी छ जुन तपाईंलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जब तपाईंको औषधि यो कोटीमा पर्दछ। नयाँ औषधीसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको बारेमा सँधै तपाईका चिकित्सक वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस्।
कम्पाउन्डिंग फार्मेसी के हो?
पल जर्ज लेब्रोन जेम्स मा टिप्पणी: 'त्यो म बाट राम्रो संग छीनिएको थियो'
घाँटी दुख्ने र बग्ने नाक को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
तपाइँ कसरी toenails अन्तर्गत कवक बाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ
मधुमेह परीक्षण को लागी दायरा के हो
संयुक्त राज्य मा सबै भन्दा सामान्य पोषण को कमी
कसरी एक साँच्चै खराब खमीर संक्रमण को उपचार गर्न को लागी